TORA Tupolev Tu-124 FSX SP2 & P3D - Rikoooo
Akachinja 18-10-2012 19: 24: 18
Munyori: VVZR & Samdim Design Group http://samdimdesign.free.fr
In tsika ndege Russian, hoyu Tupolev TU-124, muenzaniso wakanaka netsika mitinhimira. Hakuna VC (rakapotsa Cockpit) asi hazvisi izvo kukosha, chokwadi, iri anonyanya chipo chake 2D Panel riri nzwisisika chaizvo kuwedzera-mberi, unofanira kudzidza emadziro kuti Chinyorwa yokunyatsodzidzira ndege ichi, uye mumwe vaitire! Zvinosanganisira textures zvitatu: Aeroflot 60s, Aeroflot 70s uye CSA (Ceskoslovenske Avialinie)
The Tupolev Tu-124 (NATO code: Cookpot) aiva Soviet airliner pfupi-dhonza inokwanisa akatakura 56 vatakurwi. Kufamba muna 1962, yakanga yakavakwa 165 maBhaibheri.
Avaka Tupolev kambani, akasikirwa ienzane. Aeroflot kuti remunharaunda airliner yokutsiva Ilyushin Il-14. Kunotangwa kubva svikiro-dhonza Tupolev Tu-104, zvinoita sokunge shanduro duku nayo, zvakaoma kusiyanisa chinhambwe, sezvo okupedzisira reactors vakanga revatema kupinda mapapiro. Asi hazvina zvazviri kopi wakakwana. The Tu-124 akanga wandei kuvandudzika sezvinoita parachuti muparadzi amburenzi landings kana dzinotsvedza hukawanika, kuderedzwa kumanikidza matayi tasvika pane kutsauka hukawanika. Akanga zvakare mupopotedzane kwekuva inoshanda, kuva wokutanga pfupi-dhonza turbofan injini akashongedzerwa.
Details of 2D Panel mifananidzo
Downloads: 79 812
Downloads: 6 192